Somali News 1.10.22
Published January 11, 2022 at 11:10 AM CST
Heerarka tijaabada COVID-19 iyo cusbitaalada la seexiyay ayaa weli ku sarreeya Iowa.
Taasi waa sida ku cad cusboonaysiinta ugu dambeysay ee saraakiisha caafimaadka gobolka maanta (Isniin).
Gobolku wuxuu ka warbixinayaa 14-maalmood heerka tijaabada ah ee ku dhawaad 20% iyada oo in kabadan 32 kun oo tijaabo ah la xaqiijiyay usbuucii la soo dhaafay. Qiimaha 7-maalmood ee Degmada Woodbury waa 14%.
886 reer Iowan ah ayaa hadda cusbitaalka la dhigay COVID-19, oo ay 190 bukaan ku jiraan ICU.
In ka badan 8 kun oo Iowan ah ayaa la xaqiijiyay inay u dhinteen COVID-19 ilaa hadda.
Marka loo eego xogta gobolka, 56 boqolkiiba dhammaan dadka reer Iowan ayaa si buuxda loo tallaalay.
Sharci dejinta Iowa wuxuu bilaabay kalfadhiga 2022 isagoo ka hadlaya ansixinta canshuur dhimista, dib u qorida sharciyada shaqo la'aanta si dadka loogu celiyo shaqada iyo abuurista sharciga xuquuqda waalidka kaas oo go'aamin kara sida dugsiyadu u go'aamiyaan buugaagta ku haboon maktabadaha.
150-ka sharci-dajiyaan iyo shaqaaluhu waxay ku soo noqonayaan Capitol isniinta iyagoon haysan waji-xidh, tallaal ama shuruudo tijaabo ah iyadoo COVID-19 uu si degdeg ah ugu faafayo gobolka oo dhan.
Guddoomiyaha Nebraska Pete Ricketts ayaa ku dhawaaqay $500 milyan oo qorshe ah oo lagu isticmaalayo domain caan ah si loogu dhiso kanaalada Colorado taas oo u weecin doonta biyaha kaydad cusub oo laga dhisay Nebraska. Tallaabadaasi waxay u badan tahay inay horseedi doonto dacwad.